Kompany oo ka aragti dhiibtay daafaca ugu wanaagsan taariikhda horyaalka Premier League… (Ferdinand, John Terry Mise Van Dijk?) – Gool FM
Kompany oo ka aragti dhiibtay daafaca ugu wanaagsan taariikhda horyaalka Premier League… (Ferdinand, John Terry Mise Van Dijk?)
(England) 12 Sebt 2019. Daafacii hore ee kooxda Manchester City Vincent Kompany ayaa dib ugu soo laabtay dalka England, kaddib markii xalay loo sameeyay kulan sagootin ah ee dhex maray halyeeyada Manchester City iyo Premier League, xilli kulankan uu ku dhamaaday barbaro 2-2 ah.
Vincent Kompany ayaa wuxuu ka hadlay waxyaabo badan oo ku saabsan xirfadiisa weyn ee kubadda cagta dalka England, isagoo ka mid ahaa halyeeyadii ugu fiicnaa ee Manchester City soo martay, wuxuuna la qaaday koobab badan.
Kompany ayaa wuxuu ka jawaabay su’aal kaga timid shabakada “BT Sport” ee dalka England inta uu ku gudi jiray wareysi uu bixinayay waxayna su’aasha u dhacday sidan:
“Waa kuma daafaca ugu wanaagsan taariikhda horyaalka Premier League ee dalka England?”.
Daafacii hore kooxda Manchester City ee Vincent Kompany ayaana ku jawaabay:
“Virgil van Dijk” isagoo hadalkiisa sii watana wuxuu yiri:
“Waan ogahay in Virgil van Dijk uusan u soo muuqan waqti dheer sida Rio Ferdinand iyo John Terry, laakiin waxyaabihii uu soo bandhigay mudadan iyo sannadihii u danbeysayba, waxay cadeenayaan inuu yahay kan ugu fiican”.
“Waxaan u maleynayaa in xaalada uu ku sugan yahay Virgil van Dijk ay cadeeneyso inuu sidoo kale sii ahaan doono meesha ugu sareysa ee awoodiisa ciyaareed waqti dheer”.
Kooxda Liverpool oo sheegtay war ay si weyn u sugayeen taageerayaasheeda